मनिषा कोइरालाको घर कुनै राजमहल भन्दा कम छैन हेर्नुहोस – Namaste Host
February 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on मनिषा कोइरालाको घर कुनै राजमहल भन्दा कम छैन हेर्नुहोस
काठमाडौं- बलिउडमा उनको अभिनय रहेको फिल्म संजुले पनि अपार सफल्ता प्राप्त गर्याे । मनिषा को लागि फिल्म संजु निकै फाइदाजनक साबित भयो। संजुमा उनलाई नर्गिसको रोलमा निकै मन पराइएको थियो। २०१२ सालमा उनि क्यान्सरको शि कार भएकी थिइन्।
तर क्यान्सरलाई उनले जितेकी छिन्। पछिल्लो समय मनिषा सामाजिक संजालमा निकै एक्टिभ छिन्। उनि सधै सुन्दर तस्विरहरु शेयर गरिरहन्छिन्। साथै उनले आफ्नो घरलाई निकै सुन्दर तरिकाले सजाएर राखेकी छिन्। उनले आफ्नो रूमको डिजाइनमा अधिकांश फुलको प्रयोग गरेकी छिन्।
अहिलेको वै’ज्ञा’निक युगमा यौ’न आ’न’न्द लिन सम’स्या छैन। मैले पनि विभिन्न सा’धनमार्फत यौ’न आ’न’न्द लिएको छु’, उनले भनेकी छिन्, ‘यौ’न आ’न’न्द प्राप्त गर्न विवाह नै हुनु पर्दैन ।’रा’जनीति प्रवेशका बारेमा पनि दीपाले प्र’स्ट पारेकी छिन् । ‘म जीवनमा रा’जनीति गर्दैन’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा जाने मेरो कुनै सोँ’च छैन ।’
नायिका करिश्मा मानन्धर बुढी हुदैनन् की क्या हो ? हेर्नुहोस् लोभलाग्दा तस्बिरहरु
‘फोटो फिरिममा -२’ हेरेपछि शिशिर भण्डारीको श्रीमतीले यस्तो भनिन् । बुढो..के गरेको यस्तो ? (भिडियो हेर्नुस)